Vechidiki Vopihwa Rubatsiro rweMari Yekuitisa Mabasa eMaoko muEpworth neChitungwiza
HARARE — Sangano rinowona nezvevechidiki, re Youth Agenda Trust, raparura neChitatu homwe yekubatsira vechidiki mumusha we Chitungwiza pamwe neEpworth vari kuita mabasa emawoko.
Vachiparura homwe iyi mu Harare, vanowona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, Va Fortune Nyamande, vati sangano ravo rawona zvakakodzera kuti ribatsire vechidiki vari kuita mabasa emawoko ava vachiti kusimudzira vechidiki ndiko kunoita kuti hupfumi hwenyika husimukire.
Va Nyamande vati sangano ravo rine homwe yemari inoita zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora zvarichashandisa kubatsira vechidiki mumusha we Zengeza uri mu Chitungwiza pamwe nemusha weEpworth uri kumahombekombe kweguta reHarare.
Mutevedzeri wemukuru wesangano re Zimbabwe Youth Council, Va Tawanda Njerere, avo vanga vari muenzi anoremekedzwa pakuparurwa kwaitwa homwe iyi, vakurudzira Youth Agenda Trust pamwe nemamwe masangano anowona nezvevechidiki kuti apoterere nenyika yose achibatsira vechidiki sezvo vasiri kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga nepamusana pekutadza kuwana zvinodiwa nevemabhanga kuti vapihwe mari dzavanenge vachida kushandisa mukuita mabasa avo emawoko.
Mumwe wevanhu makumi mana vabatsirwa nehomwe yaparurwa ne Youth Agenda Trust iyi, ndiMuzvare Moilla Nzira, avo vanogara mumusha weEpworth.
Muzvare Nzira vanoti kushayikwa kwemagetsi mumusha wavanogara kuri kutambisa veruzhinji chamutavanhava saka nokudaro vakawona zvakakodzera kuti vagadzirire veruzhinji mwenje wekuti vawonese kana zuva rapinda muna mai varo.
Muzvare Nzira vati mari yekushandisa kuita basa iri ndiyo yanga ichivanetsa kusvika vazobatsirwa ne Youth Agenda Trust.
Homwe yaparurwa ne Youth Agenda Trust iyi, ichishanda pamwe chete nevesangano rinoshanda rakazvimirira re Action Aid, yabatsira vanhu makumi mana vari kuita mabasa emawoko anosanganisira kupfuya huku, zvekunama masimbi pamwe nezvitoro zvemudzimba kana kuti ma tuckshop uye vanhu vese ava vapihwa zvekushandisa mumabasa avo.
Vapihwa zvekushandisa izvi vachashanda vakatariswa nevabereki pamwe nehama dzavo kuti vagodzosera zvapihwa vanhu ava kana vakazvishandisa nenzira isina tsarukano.